Sida loo helo badeecadaada ku qoran Amazon - si deg deg ah iyo sahlan?
Amazon waxaa loo yaqaanaa suuqa internetka ee ugu caansan oo leh qiyaastii 170 milyan oo qof oo martida u gaar ah ayaa lagu qiyaasay bishii. Taasi waa sababta haddii aad tahay iibiye laylis ah oo aad rabto inaad ogaato sida aad u heli lahayd alaabtaada ku qoran Amazon - waxaad horay u joogtaa goobta saxda ah. Hoos waxaan kuugu soo socdaa talaabo kooban oo ah talaabo talaabo ah si aad u fahamtid sida ugu dhakhsaha badan u hesho alaabtaada ku qoran Amazon - oo bilaabi soo saarista heshiisyada iibka guulaha isla markiiba. Sidaa darteed, aan u dallacno aasaaskii aasaasiga ahaa ee geeddi-socodka.
Sida loo Helo Qalabkaaga Amazon
Ka hor inta kale, aan kuu tuso sida loo iibsado Amazon. Waxyaabahani waa in geeddi-socodka iibinta ay noqon karto mid sahlan ama mid adag - oo ku xiran nooca badeecadaha, qaybtooda, ama tirada aad doonayso inaad u dhigato bartilmaameedka dhammaan amarradaada mustaqbalka. Laakiin halkan waa afar aflabaad si aad wax badan u fududeysid, ugu yaraan kuwa la xidhiidha helitaanka alaabooyinkaaga si deg deg ah ugu qoran Amazon sida saxda ah:
1. Dooro qaybta iibiyaha saxda ah - inta badan, waxay si xoog leh ugu tiirsan tahay nooc ka mid ah ganacsiga aad u socoto. Asal ahaan, waxaad bilaabi kartaa laba siyaabood oo kala duwan - sida iibsadaha yaryar ee shakhsiyaadka ah (marka la eego in celceliskaaga qiimaha bil kasta uu ka hooseeyo 40 qalab bishii, qiimaha iibiyaha dhexdhexaadka ah ayaa kaa bixin doona wax ka badan 1. 5 doolar halkii sheyba oo lagu iibiyo), ama bilaw inaad iibsato xirfadle bilaawg ah (marka la eego in iibkaaga billaha ah laga filayo in ka badan 40 shey oo lagu iibiyo bil kasta, kharashka bil walba wuxuu bilaabi doonaa 40 baas iyo lacago gaar ah).
2. Samee xisaabtaada iibka ah ee Amazon - macnaheedu waa in aad ganacsigaaga tafaariiqeed ka diiwaan gashan tahay Amazon si aad ugu dambeyntii u bilowdo iibinta halkaa. Si aad u buuxiso qeybtan koontada xisaabta, waxaa lagaa codsan doonaa Amazon si aad u buuxiso xogta soo socota: Magaca Ganacsiga, Magaca Sharciga / Cinwaanka, Fursadaha Gaadhiga, Macluumaadka Koontooyinka Bangiga, Macluumaadka Xiriirka (labadaba Amazon laftiisa, iyo macaamiishaada mustaqbalka).
3. Abuuri oo buuxi astaanta iibiyahaaga gaarka ah - tani waa markaad doonayso in qof walba uu ku soo iibsado Amazon inuu ogaado waxa dukaameysigaaga dukaamada uu yahay dhamaanba (qaybta sharaxaadda iibka, calaamaddaada gaarka ah sida iibka Amazon, aasaasiga ah shuruudaha iyo shuruudaha Siyaasadda Soo Celinta / Lacag Celinta).
4. Hadda waxaad taqaanaa sida loo helo badeecadaada ku qoran Amazon - waa waqtigii lagu bilaabi lahaa iibinta iyo maraakiibta! Dabcan, qeybtan ficilkani waa habka ugu adag. Waxay ka dhigan tahay inaad saddex jeer isku daydo raadinta raadintaada oo aad sii wadato barashada sida loo sameeyo liisaskaaga sheygaaga. Ugu dambeyntii, si aad uga dhigto inay kuugu iibiyaan ku dhawaad ​​hab isku-dhafan Source .